Ihe siri ike: akuku, nlekọta, ozuzu - Ruta - 2019
O siri ike iche n'echiche na onye amaghị banyere osisi dị otú ahụ dịka mgbọrọgwụ.
Akụkọ ya na-alaghachi azụ ọtụtụ puku afọ, n'oge a kwa, a na-ejikarị ya na nkà mmụta ọdịnala na ná ndụ kwa ụbọchị.
Ugbu a, ifuru a na-eji ya eme ihe na nri, ọgwụ, na ụfọdụ antidotes na-akwadebe ya. Ọ na-eburu ebe nsọpụrụ na nkà mmụta ọgwụ nke oge a.
Otú ọ dị, anyị amaliteworị ichefu na osisi a bụ nnukwu onye ọbịa na akwa akwa gị. Okpuru ahihia nke mgbọrọgwụ ga-eto ma maa mma na mpaghara gị ma ọ bụrụ na i jiri obere nlekọta na nlebara anya mgbe ị na-elekọta ma na-elekọta ifuru. Na otu esi eme ya kacha mma - gụọ n'okpuru.
Ị ma? Dika akuko ndi mmadu si kwuo, n'abali nke Ivan Kupala, ifuru nke rue na-acha uhie uhie ma onye nwere oge iji kpoputa ya ga enweta obi uto.
Ịhọrọ ebe rue rue na ubi ubi
Achọrọ maka ala maka akuku
Kedu ihe kwesịrị ịbụ ọkụ maka rue, ebe ịkụ osisi ahụ
Esi kporo rue: atụmatụ na oge ịkụ ihe
Mmeputara nke usoro seminal
Ogbucha nke rue
Uzo esi agba ahihia site na nkata ohia
Na-eto eto, na-elekọta ndị na-elekọta ahụ
Olee otú mmiri rue
Osisi nri osisi
Rut na-egbu egbu
Ruta na-esi ísì ụtọ: nkọwa nke osisi ahụ
Ka anyị lee ihe bụ nke a rue. Osisi a bụ osisi shrub ogologo oge, nke nwere ihe dị nnọọ iche, nke ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịmasị. Na mpaghara Europe, n'ọhịa, rue adịghị eto, n'ihi ya ọ bụ naanị onye na-elekọta ubi ga-achọta ya n'azụ.
Ogo nke ohia di ihe di ka 55-70 cm na ogwe osisi na ala nke alaka. Kwa afọ, Ome ndị na-adịghị ike na-apụ n'anya, na nnukwu ihe nrịba, akụkụ dum nke rue nwere ike ịnwụ (na mmalite nke oge opupu ihe ubi, a kwụghachiri ya kpam kpam na mgbọrọgwụ). Ụcha nke akụkụ osisi ndị dị na osisi ahụ bụ ọgaranya na-acha odo odo, akwụkwọ na akwụkwọ ndị ọzọ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ.
N'oge okpomọkụ, ọ dị mma na-acha odo odo okooko osisi na ọ bụrụ na ị na-ahụ ezigbo anya, ị ga-ahụ ntụpọ ntụpọ na ọkụ - tank micro na mmanụ dị oké mkpa. N'ime oge anyị, ifuru nke rue na-adị ọtụtụ, na, mgbe mgbe, ọ na-adị mma ruo mgbe ọ dị afọ iri abụọ.
Ị ma? Mgbe akpochapu, epupụta nke rue nwere ihe dị iche iche, ihe na-esi ísì ụtọ ma gharakwa ịmịnye ọkụ na aka.
Fragrant Ruta bụ osisi na-enweghị atụ maka ịkụ ihe ma lekọta ya. Ala adịghị mkpa karịsịa maka ya, n'ihi ya, i nwere ike ịkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'ihu ubi gị. Otú ọ dị, otu n'ime isi ihe dị mkpa mgbe ị na-akụ osisi shrub na-enweghị atụ bụ enweghị ntinye (nchebe megide ha nwere ike ịbụ ihe okike ma ọ bụ ihe okike). N'ihi ihe ịchọ mma ya, nke a na-eme ka mpempe akwụkwọ, a na-akụkarị rue rue mma mma.
Ogige Ruta bụ ezigbo onye na-ahụ maka nkume calcareous, nke dị nro na nkume a na-echikwa nkume n'ala nke o chere na ọ kachasị mma. Osisi ahụ na-eguzogide ọgwụ oke mmiri ma ghara ịnagide mmiri siri ike. Tupu oge opupu ihe ubi, ọbụna na ọdịda, ọ dị mkpa iji miri jupụta ala ahụ ma ọ bụ ihe na-achọsi ike iji tinye fatịlaịza n'ụdị humus. Na oge opupu ihe ubi, a pụrụ ịtọghe ụwa ma gbadaa na omimi miri emi. Osisi shrub abụghị ihe na-adọrọ adọrọ na ọnọdụ ala ma nwee ike ibi n'otu ebe ruo afọ 5-6, ma na-ejide okooko mara mma.
Ọ dị mkpa! E nwere ike ịchekwa mkpụrụ osisi ahụ nke ọma karịa otu afọ.
Mgbawa maka rue, n'ebe ị ga-eto ya, kwesịrị iji zuru oke maka mmepe nkịtị, ma n'oge kachasị mma nke ụbọchị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji kpuchie ohia maka awa ole na ole.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na rue mepụtara penumbra mgbe nile ma ọ bụ na-agbawanye agbagọ, akwụkwọ nke osisi ahụ ga-amalite ịtụgharị ma gbanwee edo edo. Ya mere n'atụghị egwu, ị nwere ike ịkụ ifuru na ebe ọbụla ìhè anyanwụ dara.
Ọ ga-ekwe omume ịkụ ihe ubi n'ubi na okooko osisi na-acha odo odo n'ọtụtụ ụzọ: mkpụrụ, site na grafting ma ọ bụ kewaa ohia.
Dika iwu si kwuo, a ghaghi ibu osisi ahu n'osisi n'ime ite, ma mgbe emesiri, a ghagha ya n'ala.
N'ezie, a ghaghị akụ mkpụrụ ahụ ozugbo, ma n'otu oge ahụ, ịgha mkpụrụ nke ihe ọkụkụ ga-aba ụba, ọbụnakwa uru osisi ahụ nwere ike ịnweta nanị n'afọ ọzọ. Mgbe ọ na-akụ, ọ dịkwa mkpa ịhapụ ụlọ maka uto nke rue, ọ bụ ezie na ọ na-eme ememme 60x60 cm, nke a dị mfe ime.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ mkpụrụ, a ghaghị ịkụ mkpụrụ ahụ n'oge oyi. Na ala na-emeghe ha na-akụ na mbido mmiri, na ịgha mkpụrụ seedlings ma ọ bụ cuttings kwesịrị ịlụ na ụbọchị mbụ nke ọkọchị.
A na-ewere ụzọ kachasị mma na-ewu ewu nke mgbọrọgwụ ka ọ bụrụ ihe na-akụ mkpụrụ sitere na osisi, ka ị wee nwee ike ịmatakwu banyere mgbọrọgwụ, na ịchọta nke ọma ụdị osisi anyị bụ, anyị na-akwado ka ịmalite ịmalite ya na ya site na ịkụ mkpụrụ. Ọ bụrụ na ifuru na-etolite na saịtị gị, ma ị nakọtara mkpụrụ ya, ma ọ bụ ndị enyi gị esoro gị kerịta, a ga-akụ ha na seedlings n'oge mmalite nke oyi, n'ihi na ha ga-agbanye mgbọrọgwụ naanị mgbe ọnwa ole na ole gasịrị.
Maka ịgha mkpụrụ, dozie mkpụrụ nke ahịhịa na ahịhịa na humus. Mkpụrụ nke ịgha mkpụrụ osisi ekwesịghị igafe abụọ centimeters. A ghaghị idebe ala mgbe niile, ọ dịghịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eto eto na griin haus ma ọ bụ na windill (nke mbụ Ome ga-apụta n'ime izu ole na ole).
Ọ ka mma ịkụnye mgbọrọgwụ ahụ ozugbo na ihe dị iche iche, ma Osisi ahụ nwere ike ịfefe ọtụtụ ntụtụ.
A na-ebugharị ya na saịtị ahụ ozugbo egwu egwu niile gafeworo: na-emekarị, oge a dara na njedebe nke May na mmalite nke June.
Ọ dị mkpa! Mmiri dị mkpa dị mkpa na-enwekwa ọgwụgwọ. Ma kpachara anya na ngwa ya, dị ka nnukwu ihe nke ihe ahụ nwere ike imerụ ahụ gị.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịghara ịgha mkpụrụ na-esi ísì ụtọ, mgbe ahụ, enwere ụzọ ọzọ dị mfe iji mụta ya - grafting. Akpa, ịkwesịrị ịkwadebe mkpụrụ osisi ndị ahụ, bụ nke a na-ewepụ na mmalite oge opupu ihe ubi site na nkwụsị nke afọ gara aga. Mgbe e bechaa, a na-etinye ha n'ime akpa na mmiri maka ịmalite.
Na mmiri, alaka nke rue gbanyere mkpọrọgwụ maka ihe dịka otu ọnwa, tankị ga-adịkwa ebe ọkụ. Mgbe ahụ, a na-akụ mkpụrụ osisi na-emeghe n'ala ma ọ bụ mkpụrụ maka ibuwanye nke mgbọrọgwụ.
Ọ bụrụ na ị na-etinye ịcha n'ime ite ahụ, mgbe ụbọchị 40 - 50 gasịrị, ọ ga-adị njikere maka ibudata na saịtị ahụ. Ma ọ bụrụ na ị na-akụ mkpụrụ osisi na-emeghe n'ala, ị ga-ekpuchi ya na fim ma mepụta penumbra. N'okwu a, mgbọrọgwụ na-eme n'ime ụbọchị 50 - 60.
Site na kewaa ohia, a na-agbasa rue rue mmiri ma ọ bụ n'ọnwa ikpeazụ nke oge okpomọkụ. Iji mee nke a, i kwesịrị igwu ohia (ọkacha mma na ndụdụ), nyochaa ya maka ọganihu na-adịghị mma (ọ bụrụ na ọ bụla, jiri nlezianya kpochapụ ha), ma jiri nlezianya belata rhizome. Egbuputa ohia ka a ghazie ya ozugbo n'ime olulu mmiri, ebe o buru na ha na compost. Ikwesiri imikpu mgbọrọgwụ ahụ n'otu omimi dị ka ọ dịbu.
Ruta adịghị mkpa nlebara anya. Naanị nye ya ka ọ bụrụ na anwụ na-acha ma ghara ịkọ ala - nke ahụ bụ ihe niile dị mkpa nke ifuru ndịda. Mkpụrụ osisi dị mkpa dị ntakịrị (mgbe ụfọdụ ọ na-eme otu ugboro n'afọ iri ọ bụla), mana nchebe site na ntinye ga-adịgide adịgide. Osisi na-esighi ike ibute ọrịa na pests, onye iro ya bụ ahịhịa. Echefukwala igbo ahihia na-esi ísì ụtọ n'oge na-atọghe ala n'ala ebe ọ na-etolite. O kwesịkwara ịtụle eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezie na osisi ahụ na-eme ka ndị na-emeri anyị, ọ kacha mma iji chebe ya maka oge oyi.
Ọ dị mkpa! Emetụla ifuru na aka aka gị. Nke a ga - eme ka ọnyá na ịmịja, mgbe ọ na - ejupụta ya na ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ mmanụ nwere ike iduga n 'ọnụ ọgụgụ obi, ahụ ọkụ na ọbụna ụfụ.
Ruta bụ okooko osisi na-eguzogide mmiri, ya mere ọ chọrọ nanị ụbọchị dị ọkụ maka ịgbara mmiri. Mgbakasị ọ bụla nke ala nwere ike ibute ọrịa na ọnwụ ọnwụ nke osisi ahụ. Ọzọkwa, ihe omume ọzọ ga-agbacha ifuru.
Mgbe oyi, ị nwere ike belata alaka ndị nwụrụ anwụ na ifatilaiza na mgbọrọgwụ fatịlaịza na-adịghị ike, ọ bụ ezie na n'ozuzu osisi ahụ adịghị mkpa fatịlaịza pụrụ iche. Ị nwere ike ịzụrụ ya naanị otu ugboro n'afọ, na-eji mgbagwoju anya maka nke a.
Ruta na-eme nke ọma ka ọ kwachaa. Mgbe oyi na-atụ ma ị tọhapụrụ osisi ahụ na ebe obibi oyi, ọ dị mkpa ka ị gbutuo ndị nwụrụ anwụ na buds. I nwekwara ike wepu ike na ochie Ome. Ọ bụrụ na a leghaara osisi ahụ anya, ọ ga-abara ya uru nke ọma site n'ịdị mma nke ọma, nke na-esite na mgbọrọgwụ nanị 15 na 20 cm nke alaka. Ke adianade do, site n'enyemaka nke ịchachaa, i nwere ike inye osisi ahụ ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma na uru ịmepụta kọmpụ kọmpat.
N'agbanyeghị na ọ mara mma, osisi a kọwara bụ nnọọ nsi. Ya mere, na-eji mgbọrọgwụ dị ka ose, iji mepụta ọgwụ ọjọọ, yana ịgwọ usoro omenala, echefula na na nnukwu osisi, osisi ahụ nwere ike ịdị oke egwu.
Ọ bụrụ na ihe ọṅụṅụ na-agbanye na akpụkpọ anụ ahụ, enwere ike ịnweta ọkụ na ọbụna dermatitis. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-emegharị nke rue na-esi ísì ụtọ, ị ga-eyi uwe. Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​gaghị agbanye mgbọrọgwụ (karịsịa, dị ka ose ma ọ bụ osisi ọgwụ) nye ụmụ nwanyị dị ime na ndị nwere ọrịa afọ.
Veinik ala (ala): ojiji, ọgwụ ọgwụ na contraindications
Ihe niile na-acha ọcha tụrụ na eggplant seedlings: ihe ha pụtara si, na-atụ aro otu esi tufuo ha
Uru na nsogbu nke euphorbia ụlọplant: ihe ize ndụ nke ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ugbo nke rue: kuru ma lelee ubi